Dhageyso,, wararkii ugu Danbeeyey diyaaradii shalaly lagu rasaasesyey Degmada Qasaxdheere iyo maamulka Degmada oo kahadalay . – Radio Baidoa
Dhageyso,, wararkii ugu Danbeeyey diyaaradii shalaly lagu rasaasesyey Degmada Qasaxdheere iyo maamulka Degmada oo kahadalay .
Diyaarad oo sidday sahay gargaar ayaa lagu rasaaseeyey degmada Qansaxdheere ee Gobolka baay xilli ay doonayso inay halkaasi ku degto, sida ay sheegeen dad ku sugan Gudaha degmadaasi,isla markaana maqlay rasaasta lagu riday.
Diyaaradda ayay waxaa ku dhacay rasaas fudud, waxaana shilkan uu dhacay wax yar ka hor markii diyaarada ay u dhawaatay Garoonka diyaaradaha degmada Qansaxhdeere oo ay ku sugan yihiin Cidiamo isugu jira Itoobyaan iyo Soomaali.
Wararku waxay sheegayaan in diyaaraddu ay markii dambe kasoo kacday Qansaxdheere isla markaana ay kusoo laabatay Muqdisho,waxaana Diyaaradda ay Qansaxdheere gaysay gargaarka nafaqada leh oo loo waday dumarka iyo carruurta.
Guddoomiyaha degmada Qansaxdheere ee Gobolka Baay Cabdirisaaq Cabdi Ibraahim ayaa sheegay in diyaaradda oo jawi hoose ku duuleysa ay rasaas ku fureen Xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab,isla markaana rasaasta ay ka halyeeshay garbka iyo qeybta dambe ee diyaaradda.
Waxaa uu sheegay in diyaaradda ay siday gargaar una rarneyd hay’adda WFP,isla markaana ay si nabad ah ku degtay Garoonka degmada Qansaxdheere dibna ugu soo laabatay Magaalada muqdisho.
Ugu dambeyn waxaa uu sheegay inay ku raadjoogaan dadkii ka dambeeyay in la rasaaseeyo diyaaradaas,isla markaana Ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ay wadaan howlgallo ay ku doonayaan inay kusoo qabtaan dadkii falkaasi ka dambeeyay.
Bishan horraanteedii ayey diyaarad ku dhacday Bardaale taasi oo ay ku dhinteen lix qof,waxaana Mas’uuliyiinta maamulka ay sheegeen inay ciidamada Itoobiya rasaaseeyeen diyaaradda, waxaana haatan socda baaritaan.
Dhageeyso ,,Mudo kororsi looga Digey Dowlada federaalka soomaaliya.
Dowladda Somalia oo ku dhawaaqday kordhinta Goobaha lagu baaro COVID-19.